Manampia toerana amin'ny sary ao amin'ny Photos for Mac | Avy amin'ny mac aho
Miaraka amin'ny habetsaky ny fampahalalana ananantsika amin'ny Macs, zava-dehibe ny fananana ny fampahalalana arak'izay azo atao. Folder, labels, tsy misy safidy tokana na tsara kokoa noho ny iray hafa, miankina amin'ny hetahetantsika na ny safidintsika rehetra izany.
Fa raha miresaka sary isika, dia azo atao katalaogy izany ary omen'ny karazana toetra maro karazana. Ny iray amin'ireo toetra lehibe dia ny toerana, mety amin'ny fitadiavana sary amin'ny andro iray na toerana manokana. Ho an'ity amin'ny Mac dia manana ny fampiharana Photos izahay. Na izany aza, tsy maintsy tadidintsika fa ny sarin'ny findaintsika dia hitondra ny toerana, raha manana ny safidy azo ampiasaina isika, fa ny an'ny fakantsary hafa kosa mety tsy.
Noho izany, ho hitantsika ny fomba hahitana ireo sary ireo ary hampidirina ny toerana akaiky indrindra. Ho an'ity dia mila manana ny sarintsika ao amin'ny Fampiharana sary ary ampiasao ny rakikira maranitra. Raha mbola tsy manana ny sarinao ao amin'ny fampiharana ianao dia manafatra azy ireo dia tsotra toy ny fitarihana azy ireo mankamin'ny sary famantarana ny Photos.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra ny fampiharana Photos. Manaraka izany dia mankeny amin'ny menio fisie izahay ary hitady ny safidy «New Smart Album» na raha tsy izany dia hampiasa ny hitsin-dàlan'ny fitendry izay Alt + Cmd + N
Hisokatra ny menio albums mahira-tsaina. Voalohany, tokony hametraka a omeo anarana ny rakikira. Raha avelantsika ho azy ary manana rakikira mihoatra ny iray isika, dia ho sarotra kokoa ny mahita ilay tadiavintsika. Avy eo dia tonga ny fotoana fanivanana: amin'ny saha voalohany amin'ny ankavia, dia hofaritana fa hanao ny sivana izahay Photos. Avy eo dia miseho ilay fepetra, miaraka amin'ny "is / is" na "tsy / tsy." Raha ny momba anay dia hiteny izahay hoe: "Tsy / tsy" ary amin'ny farany dia hanondro isika, "Tagged with GPS."
Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha any amin'ny pejy lehibe amin'ny sary isika, izay ahitana ireo rakikira rehetra. Hitady ny anay izahay ary hahazo azy io, raha misy ahy dia misy sary 655 tsy misy tag GPS.
Hanamarihana azy ireo tsara, hofidintsika ny sary rehetra mizara toerana mitovy ary manery: Cmd + i. Misokatra ny menio izay ahitantsika ny sahan'ny toerana. Hotondroinay ny toerana nalaina sary. Raha manana fampahalalana momba ity toerana ity i Apple, dia hanome soso-kevitra hisafidy izy io. Raha tsy izany dia asio fampahalalana betsaka araka izay azo atao.
Raha vantany vao vita io dia tokony hanjavona avy ao amin'ny fampirimana "tsy misy toerana" ny sary satria efa ananany.
ankehitriny ho mora kokoa ny mahita azy ireo avy amin'ny motera fikarohana na miaraka amin'ny fanampian'ny Siri.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Manampia toerana amin'ny sary ao amin'ny Photos for Mac
Lahatsoratra tena ilaina tokoa. Tsy azoko an-tsaina fa azo alaina geotagged ny sary avy ao anatin'ny fampiharana Photos! Misaotra indrindra anao!
Makà Disk Drill Media Recovery amin'ny € 0,99 ihany, mitahiry efa ho efa-polo euro